နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောအဖြေ ၁၀၀% အောင်မြင်မှု စီးပွားရေးစတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ လူသားအရင်းအမြစ်များ၊ အလုပ်များ | အများကြီးပို | သန်းချီလုပ်သူ
Alaska- ကျောက်ချစခန်းအယ်လ်ဘေးနီးယား- Tirana- Durres- အယ်လ်ဘေးနီးယားအခြားသူများဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ- Antigua နှင့် Barbudaအာဂျင်တီးနား- Buenos Aires- Cordoba- RosarioArizona- ဖီးနစ်Arkansas - Rock Littleအာမေးနီးယား- Yeravanၾသစေတးလ်- မဲလ်ဘုန်းမြို့- ဘရစ္စဘိန်း- ပါ့သ်- ဆစ်ဒနီ- အခြားသူများသြစတြီးယား- ဗီယင်နာအဇာဘိုင်ဂျန်- ဘာကူဘဟားမား- နာဆောဘာရိန်း- ဘာရိန်းဘယ်လာရုစ်- Minsk- အခြားသူများဘယ်လ်ဂျီယမ်- Ixelles- Antwerpbelize- ဘီးလီဇ်စီးတီးဘိုလီးဗီးယား- Santa Cruz de la Sierraဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား- Sarajevo- Banja Luka- အခြားသူများဘော်စတွန်ဘရာဇီး- ဆောပိုလို- ရီယိုဒီဂျနရို- ဆာဗေးဒေါ- Brasilia- အခြားသူများဘူလ်ဂေးရီးယား- ဆိုဖီယာ- PlovdivBVI- လမ်းမြို့- စပိန်မြို့California- ဆန်ဖရန်စစ္စကို- Los Angeles မြို့ကေနဒါ- တိုရွန်တို- Montreal- Calgary- Winnipeg- ဗန်ကူးဗား- ကွီဘက်- အခြားသူများကေမန်ကျွန်း- George Townချီကာဂိုချီလီ- စန်တီယာဂို- Puente Alto- အခြားသူများတရုတ်နိုင်ငံ- ရှန်ဟိုင်း- ပေကျင်း- ရှန်ကျန်း- ကွမ်ကျိုး- ချန်ဒူး- ဝူဟန်- အခြားသူများColorado- Colorado Springs- ဒင်းဗားConnecticut- Bridgeportကော့စတာရီကာ- San Joséခရိုအေးရှား- Zagrebကျူးဘား- ဟာဗာနာဆိုက်ပရပ်စ်- Egkomi- နီကိုစီယာချက်သမ္မတနိုင်ငံ- ပရာ့ဂ်- BrnoDelaware- ဝီလ်မင်တန်ဒိန္းမတ္- ကိုပင်ဟေဂင်Denverကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်- DCဒိုမီနီ- Roseauဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ- စန်တိုဒိုမင်ဂို- စန်တိုဒိုမင်ဂို Oesteအီကွေဒေါနိုင်ငံ- ကွီတို- Guayaquil- အခြားသူများအက်စ်တိုးနီးယား- Tallinn- တာတူးဖီဂျီ- Suvaဖင်လန်- ဟယ်လ်စင်ကီFlorida- မိုင်ယာမီ- Indialantic- Orlando တွင်- Tampaပြင်သစ်- ပဲရစ်- လိုင်ယွန်Georgia- Tbilisi- Batumi- အတ္တလန်တာဂျာမနီ- ဘာလင်- Cologne- ဖရန့်ကတ်- ဟမ်းဘတ်- အခြားသူများဂရိနိုင်ငံ- အေသင်- သက်သာလောနိတ်- ပက်ထရာ- အခြားသူများနေးဒါ- ဂရီနာဒါဂွာတီမာလာ- ဂွာတီမာလာစီးတီးHawaii- ဟိုနိုလူလူဟောင်ကောင်- ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီ- ဘူဒါပက်အိုက်စလန်- ရက်ယာဗစ်Idaho- Boise CityIllinois- ချီကာဂိုအိႏၵိယ- မွန်ဘိုင်း- နယူးဒေလီ- ချင်နိုင်း- Hyderabad- ဘန်ဂလို- Chandigarh- ကလက္ကတာ- Goa- Patna- Ahmedabad- အခြားသူများအိန္ဒိယ- IndialanticIndiana- Indianapolisအင်ဒိုနီးရှား- ဂျကာတာ- Surabaya- Medan- Bandung- ဘာလီ- အခြားသူများIowa- Des Moinesအီရန်- တီဟီရန်- Mashhad- Isfahanအိုင်ယာလန်- Dublinဣသရလေ- တဲလ်အဗစ်- ယေရုရှလင်အီတလီ- မီလန်- ရောမ- နေပယ်- တူရင်- ဖလောရင့်စ်ဂျပန်- တိုကျို- ယိုကိုဟားမား- အိုဆာကာ- Nagoya- အခြားသူများKansas - Wichita- Overland ပန်းခြံ- Kansas Cityကာဇက်စတန်- Алматы- အေတာနာKentucky- Louisville က- New Orleans- Baton Rougeကူဝိတ်- Al Ahmadi- ကူဝိတ်စီးတီးကာဂျစ္စတန်- Бишкекလတ်ဗီးယား- ရီဂါ- Daugavpilsလီချင်စတိန်း- Vaduz- Schaanလစ်သူ- Vilnius- KaunasLos Angeles မြို့လူဇင်ဘတ်- လူဇင်ဘတ်စကားမကာအို- မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယား- SkopjeMaine- Portland- သြဂတ်စမေလးရွား- ကွာလာလမ်ပူ- Klang- Kampung Baru Subang- Johor Bahru- Petaling Jayaမော်လ်ဒိုက်- အထီး- အခြားသူများကိုမော်လ်ဒိုက်မော်လ်တာ- Santa Venera- Vallettaမာရှယ်ကျွန်းစု- MajuroMaryland- AnnapolisMassachusetts- ဘော်စတွန်မောရစ်ရှ- Port Louisမက္ကစီကို- မက္ကစီကိုစီးတီး- Iztapalapa- Ecatepec de MorelosMichigan- ဒက်ထရွိုက်Micronesia- WenoMinnesota- Minneapolis- စိန့်ပေါလ်Mississippi- ဂျက်ဆင်Missouri- Kansas City- စိန့်လူးဝစ်မော်လ်ဒိုဗာ- ခိရှီနို- Tiraspolမိုနာကို- Monte Carlomontana- Billingsမွန်တီနီဂရိုး- PodgoricaNebraska- လင်ကွန်း- အိုမာဟာနယ်သာလန်- အမ်စတာဒမ်- ရော့တာဒမ်- ဟိဂ်Nevada - Las Vegas မှာ- HendersonNew Hampshire- မန်ချက်စတာNew Jersey - Newark- ဂျာစီစီးတီးNew Mexico - Santa Fe- AlbuquerqueNew York - နယူးယောက်- Rochester- Yonkers- ဆိုင်းရာကူစ်းနယူးဇီလန်- ခရစ္စ- အော့ကလန်- နယူးဇီလန်နိုင်ငံNorth Carolina - Charlotte- RaleighNorth Dakota- Fargoေနာ္ေဝး- အော်စလို- Bergen- TrondheimOhio- ကိုလံဘတ်- ကလိဗ်လန်Oklahoma- ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီးOregon- Portland- လမ်ပနားမား- ပနားမားမြို့ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ- ဆိပ်ကမ်း Moresbyပါရာဂွေး- Asunción- အခြားသူများPennsylvania - Philadelphia တွင်- Pittsburghဖိလစ္ပုိင္- မနီလာ- Quezon စီးတီး- Davao စီးတီး- အခြားသူများပိုလန်- ဝါဆော- ကကရော့- Lodz- ဝroclawပေါ်တူဂီ- လစ္စဘွန်း- ပေါ်တိုPuerto Rico- San Juanကာတာနိုင်ငံ- ဒိုဟာ- Ar RayyānRhode Island- Providenceရိုမေးနီးယား- ဘူခါရက်ရုရှားနိုင်ငံ- မော်စကို- စိန့်ပီတာစဘတ်- Novosibirsk- Yekaterinburg- Nizhniy Novgorod- Samara- Omsk- အခြားသူများစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်- Basseterreစိန့်လူစီယာ- Castriesဆန်မာရီနို- Serravalleဆော်ဒီအာရေဗျ- Riyadh- ဂျေဒါ- မက္ကာ- မက်ဒီနာဆားဘီးယား- ဘဲဂရိတ်- Novi Sad- အခြားသူများseychelles- ဗစ်တိုးရီးယားစင္ကာပူႏုိင္ငံ- စင်ကာပူဆလိုဗက်ကီး- Bratislava- Košiceဆလိုဗေးနီး- Ljubljana- Maribor- Celjeတောင်အာဖရိက- Johannesburg- ကိပ်တောင်း- DurbanSouth Carolina- ကိုလံဘီယာ- CharlestonSouth Dakota- Sioux ရေတံခွန်ေတာင္ကုိးရီးယား- ဆိုးလ်- Busan- အင်ချွန်း- ဒေဂူစပိန်- မက်ဒရစ်- ဘာစီလိုနာ- ဗလင်စီယာ- SevillaIbiza- Zaragozaသီရိလင်္ကာနိုင်ငံ- ကိုလံဘို- Kaduwela- မဟာရပ်ဂါ- Kesbewa- Moratuwaဆြီဒင္ႏုိင္ငံ- စတော့ဟုမ်း- Goeteborg- Malmoe- Helsingborgဆွစ်ဇလန်- Genève- ဇူးရစ်- ဘေဆယ်လ်- Bernထိုင်ဝမ်- ထိုင်ပေမြို့- Kaohsiung- Taichung- Tainan- Banqiao- Taoyuan City- Hualien စီးတီးTajikistan- ဒူရှန်ဘီ- KhujandTennessee- Nashville- နောဖပြည်၌- နို့Texas- အော်စတင်- ဟူစတန်- Dallas မြို့- San Antonio တွင်ထုိင္းႏုိင္ငံ- ဘန်ကောက်- Krung Thep- နင်သာဘူရီ- ပတ္တရား- ထိုင်းနိုင်ငံကြက်ဆင်- အစ္စတန်ဘူလ်- Ankara- Antalya- Bursa- Izmir- အခြားသူများယူကရိန်း- ကိယက်ဗ်- Kharkiv- Donetsk- Dnipro- အခြားသူများအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု- ဒူဘိုင်း- အဘူဒါဘီ- အိုမန်- Sharjah- Al Ain- မူဆာဖာ- Ajman- Ras al-Khaimah- Al Fujayrahယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း- လန်ဒန်- ဘာမင်ဂမ်- လီဗာပူးလ်- Nottingham- Edinburgh- လိဒ်စ်ဥရုဂွေး- Montevideo- Salto- အခြားသူများUtah- Salt Lake City၊- အနောက်တောင်ဘက်စီးတီးဗာနူအာ- Port Vilaဗင်နီဇွဲလား- Caracas- Maracaibo- မာရာကေး- ဗလင်စီယာVermont- ဘာလင်တန်ဗီယက်နမ်- ဟိုချီမင်းစီးတီး- ဟနွိုင်း- အခြားသူများVirginia- ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ- -Norfolk- RichmondWashington- အိုလံပစ်- ဆီယက်တဲလ်ဝါရှင်တန်ဒီစီWest Virginia- CharlestonWisconsin- Madison- မီဝါကီးWyoming- Cheyenne
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပါ | ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အထူးပြု၊ ဝင်လာနေထိုင်ခြင်း, နေထိုင်ခွင့်, အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်, ဗီဇာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်နှင့်တူ, တူသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုကိုစတင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ, ကို virtual ရုံး, VoIPဒီအပြင်အပြင် virtual နံပါတ်နှင့် SIP Trunk အပါအ ၀ င် လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုများအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား၎င်းတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များ၊ 106 နိုင်ငံများ အများဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုသည် ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများ.
အောင်မြင်သောနှင့်စျေးသက်သာဖြေရှင်းနည်းများ: တစ်ဦးချင်းစီ | မိသားစုများ | ကုမ္ပဏီများ
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစာရင်း -
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ : လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံတကာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ပြည်ပမှာလေ့လာမှု သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်အခြေခံပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကောလိပ်များတွင်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိတက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များစာရင်း။
စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ: ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၀ ယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး ၀ ယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း၊ တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ VOIP Solution၊ DID နံပါတ်များ၊ CRM Solutions, ကုန်သည်စာရင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အကောင့်ပြင်ပ၊ ရုံးခွဲများ၊ စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ချပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ ဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၊
HR ဝန်ဆောင်မှုများ: စိတ် ၀ င်စားမှုရှိသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများ - ၀ င်ငွေခွန်အား ၀ ယ်ယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြင်ဖက်၊ RPO၊ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ယောဘရှာသည် သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေပါ။Job Portal သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်.
အိမ်ခြံမြေ ၀ န်ဆောင်မှုများ: အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေလျှင်သို့မဟုတ်ရုံး၊ တိုက်ခန်း၊ အိမ် (သို့မဟုတ်) စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေများကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ကိုသုံးပါ အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ်.
အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများ: ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုင်တီအဖွဲ့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူများအားအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ၀ က်ဘ်တည်ဆောက်မှု၊ ဝဘ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊
Classified Portal: အကယ်၍ သင်သည်ရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရုံးခန်းများ၊ အိမ်များအတွက်ပရိဘောဂများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ငါတို့ကိုလည်းသုံးနိုင်သည် Classified Portal ကို.
တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားနိုင်ငံတကာမှတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် ရှေ့နေအဖွဲ့ နှင့်နိုင်ငံတကာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြissueနာကိုမဆိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Solutions: 43,207
မစ်ဆူဘီရှီ | အမေဇုံ | ဟတ်ဇ | Larsen & Toubro | Keller | Air Serbia | Best Western | Reliance | အက်ရှလေအိမ်ဆိုင် | Fichtner | HTC က | ဒစ္စနေး | သွားလေ၏ | Adroit | HCL အမြဲတမ်း | VGA | ဆွစ် | ခြောက်လ Sigma | သှေးခုနျခွငျး | Tel - Toubro | Insurekaro.com | အိန္ဒိယနိပွန် | IBuyFresh.com | WeWork | Limra | လိပ်ပြာ | နေပြည်တော် | Visteon
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
105 နိုင်ငံများနှင့်ယူအက်စ်၏ 50 ပြည်နယ်များ
UOB | Standard ဇယားကွက် | အမေရိကဘဏ်၏ | HSBC က | ICICI | Deutsche ဘဏ် | ဘဏ် Chase | ကေမန်အမျိုးသားဘဏ် | ဘီလီဇ်ဘဏ် | စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု NBD | ABC ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း | UMB ဆွစ်ဇာလန် | Hang Seng ဘဏ် | စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | OCBC ဘဏ် | အာရှဘဏ် | ပထမ ဦး ဆုံးကာရစ်ဘီယံ | တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးဘဏ် | ပြည်ထောင်စုဘဏ် | Danske ဘဏ် | Societe အထွေထွေဘဏ် | Commerezbank
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပြောင်းရွှေ့လိုသောမိသားစုများအတွက်
လူကြီးမင်းတို့၏အားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါသည် ဝင်လာနေထိုင်ခြင်း Immigration Solutions, Temporary Residency, အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသား၊ Investor လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အလုပ်ပါမစ်များစသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ငှားရမ်းထားသောနေရာထိုင်ခင်းရှာခြင်း၊ ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ထောက်ခံမှု, စီးပွားရေးရောင်းအားနှင့်ဝယ်ယူမှုကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ ပြီးအများကြီးပို။
နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတကာတွင် ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ချဲ့ရန်မျှော်လင့်သည်
ကျနော်တို့ထောက်ခံပါတယ် setup ကိုစီးပွားရေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း, စီးပွားရေးရောင်းအားနှင့်ဝယ်ယူမှု, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို, virtual ရုံးများ, virtual နံပါတ်များ, နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့မှု, တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ, ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အိမ်ခြံမြေအကြံပေးခြင်း, စိတ်ကြိုက် HR ဖြေရှင်းချက်, CRM Solutions, ကုန်သည်အကောင့်နှင့်ငွေပေးချေသည့်တံခါးပေါက်, ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး နှင့် လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု, အိုင်တီဖြေရှင်းချက် ကဲ့သို့ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, web development, အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, software development, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး နှင့် အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Merchant Account သို့မဟုတ် Payment Gateway မရှိသလား။
150+ နိုင်ငံပေါင်း 170 ရှိငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
$ 100 ကနေကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု
ယူအက်စ်ပြည်နယ် ၅၀ အပါအဝင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ၁၀၆ ခုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Guarantee of Service Excellence ဖြင့်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အလုပ်ပါမစ်များနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အလုပ်ခွင့်ပါမစ်များအားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါသည်။
ပြောင်းရွှေ့လိုသောတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ရှာဖွေခြင်း၊ ငှားရမ်းထားသောနေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေခြင်း၊ ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းစသည့်အထောက်အပံ့များဖြင့်အယ်လ်ဘေးနီးယားအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်များအားအဆုံးမှအဆုံးအဖြေများနှင့်အကူအညီများကိုပေးပါသည်။ လူနေအိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ပရိဘောဂများ ၀ ယ်ခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ လိုက်နာခြင်း၊ တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအခြားအထောက်အပံ့များနှင့်အတူအဆုံးမှအစဖြေရှင်းချက်များနှင့်အကူအညီများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
ခရီးသွားဗီဇာ၊ စီးပွားရေးဗီဇာ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်းအတွက်အဆုံးမှအစဖြေရှင်းပေးသွားမည်။ သင်၏အဓိက ၀ န်ထမ်းများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းတွင်သင့်ကိုကူညီပါ။ စိတ်ကြိုက် HR ဖြေရှင်းချက်များ၊ စီးပွားရေးရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ virtual နံပါတ်များ၊ virtual ရုံးများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ CRM Solutions၊ Software Development၊ Blockchain developmentb ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ။
အလုပ်ရှာဖွေသူများ၊ အလွတ်များ၊ Intern များနှင့်အကောင်းဆုံးလျှောက်ထားသူများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပေါ်တယ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ GPA နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှန်တကယ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူသည်သင်၏ဘတ်ဂျက်အပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံး ၁၀၀% အောင်မြင်သောရလဒ်အတွက်သင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
သင့်စီးပွားရေးကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
သင်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းမှုများကိုအစကတည်းကအောင်မြင်သည်အထိ။
Million Makers သည်တစ်နေရာတည်းတွင်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသော၊ ခွင့်ပြုချက်၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံတကာပညာရေး၊ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ စီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာချထားမှု၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော HR ဖြေရှင်းချက်များ၊ စီးပွားရေးအရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ CRM Solutions၊ ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ တရားစီရင်မှု ၁၀၅ ခုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လျှောက်ထားခြင်းပုံစံ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ virtual ရုံးများ၊ virtual နံပါတ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှု၊ တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ ဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးခြင်း၊ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Ec စသည့်စိတ်ကြိုက်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းမှုများနှင့် Blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။